Faa'iidooyinka iyo qasaaraha qaababka lacag dirista - Amjambo Africa
-Go’aansiga qaabka loo adeegsado dirista lacagta ma sahlana. -Waa kuwan qaar ka mid ah faa’iidooyinka iyo qasaaraha in la tixgeliyo.
-Union Deynta ururada iyo wareejinta bangiyada
Ururada amaahda badan ee Mareykanka iyo bangiyada waxay bixiyaan adeegyo fiilooyin lacag ah
Faa’iidooyinka Lacag u dirista ururada deynta ama bangiga ayaa ah mid sugan oo la isku halleyn karo, inta badanna way ka habboon yihiin adeegyada kale maxaa yeelay dadku uma baahna inay abuuraan koontooyin cusub meel kale.
Khasarah: Ururada amaahda Ururada iyo bangiyada waxay badanaa ka qaadaan khidmadda aasaasiga ah inay lacag ugu diraan si caalami ah. Sidoo kale, ururada amaahda ee qaataha ama bangiga ayaa laga yaabaa inay qaadaan lacag wareejin ah. Haddiise lacagta loo beddelo lacag kale, qofka qaataha ah waxaa laga yaabaa inuu helo qaddar ka duwan inta uu diro qofka loogu talagalay iyadoo lagu saleynayo sicirka sarrifka. Hay’adaha qaar waxay ogol yihiin in lacag dibedda loogu diro mareegtooda ama barnaamijkooda moobiilka, laakiin kuwa kale waxay u baahan yihiin soo diraha inuu soo booqday laanta, taas oo macnaheedu yahay wareejinta waa in lagu sameeyaa saacadaha shaqada.
Adeegyada fiilooyinka, dhaqameed
Western Union iyo MoneyGram waxay ahaayeen xulashooyinka taga-socodka lacagaha loogu diro caalamka muddo dheer.
Fa’iidoyinka: Western Union waxay leedahay in kabadan 500,000 goobood oo kabadan 200 oo wadan halka MoneyGram ay leedahay in kabadan 350,000 goobood oo kabadan 200 oo wadan. Labadaba, dadku waxay lacag uga diri karaan bogagga internetka, barnaamijyada, ama goobaha jir ahaaneed. Dirayaasha waxay isticmaalo karaan kaararka amaahda ama kaararka, ama xitaa lacag. Qaatayaashu waxay ku soo ururin karaan lacagta tooska ugu shubi kara akoonkooda, kaarka debitka ee horay loo sii qaatay, ama kaash ahaan. Qofka qaata wuxuu ku heli karaa lacagta daqiiqado gudahood, haddii loo baahdo.
Qasaarooyinka: Khidmadaha lagu dirayo lacagta ee loo maro Western Union ama MoneyGram waxay kuxirantahay sida lacagta loo diro, sida ugu dhakhsaha badan ee loogu baahan yahay in loo wareejiyo, iyo halka qofka qaata uu ku yaalo. Soo-qaadashada kaashku waa ikhtiyaar keliya inta lagu jiro saacadaha shaqada ee laanta. Bixinta khidmadaha waxaa sii dheer, kuwa isticmaalaya Western Union ama MoneyGram waa inay tixgeliyaan sicirka sarrifka lacagaha.
Bixiyeyaasha xawilaadda khadka tooska ah
Iyo Ikhtiyaarrada khadka tooska ah sida Xoom, Wise, iyo OFX ayaa caan ku sii kordhaya maxaa yeelay way habboon yihiin oo badiyaa waxay leeyihiin khidmado ka hooseeya.
Faa’iidooyinka Sababtoo ah bixiyeyaasha wareejinta khadka tooska ah waxay u dhaqmaan sidii dhinac saddexaad oo macaamil ganacsi ah, soo diraha inta badan waxaa laga qaadaa lacag la’aan, ama khidmadaha wareejinta oo aad u hooseeya iyo sicirka sarrifka. Soo diraha ayaa lacag ku wareejinaya koontada shirkada ee U.S. Shirkadu waxay markaa u wareejineysaa qadar la mid ah qofka qaata ee ku sugan wadanka qofka qaata. Iyadoo lacag la’aan ay si toos ah uga tagayso Mareykanka, barnaamijyada ayaa awood u leh inay lacagtooda hoos u dhigaan. Wareejinta waa deg deg, qiimo jaban, oo laga heli karaa si sahlan loo isticmaalo karo barnaamijyada internetka iyo mobilada.
Qasaarooyinka Xoom waxaa laga heli karaa oo keliya 120 dal, OFX waxaa laga heli karaa oo keliya 80 dal, halka Wise kaliya laga heli karaa 70 dal. Qaatayaasha lacag-bixinta Wise iyo OFX sidoo kale waa inay lahaadaan xisaab bangi si ay lacag u helaan. Intaa waxaa sii dheer, in badan oo bixiyeyaasha wareejinta khadka tooska ah waxay leeyihiin qaddarrada wareejinta ugu yar oo laga yaabo inay ku adkaato qaarkood inay awoodaan.
PreviousMiyaan bilaabaa samafal si aan ugu caawiyo dadka guryahooda ku nool?
NextKhudrad Afrikaan ah oo cusub ayaa laga heli karaa halkan Maine!